Robot-kii Tareenka Adduunka ugu Horreeyay ee Australia | RayHaber
HomeDUNIDAOceania61 AustraliaWorld Train Robot ee Australia
05 / 01 / 2019 61 Australia, DUNIDA, tareenka, GUUD, Headline, Oceania
Dunyanin waxay horay u tababareysaa robotka Australiya
Australiya, shirkadda macdanta birta ah, Rio Tinto, ayaa bilaabay shabakad tiknoolajiyadeed oo si buuxda u shaqeysa oo leh tiknoolajiyadda tareenka ugu weyn aduunka.
Shabakadda tareenka ee Pilbara, Galbeedka Australia, waxay leedahay dherer ku saabsan mugdiga 800. Tareenadu waxay socdaan safar saacad ah, oo ay ku jiraan loading iyo loading of cargo. Afhayeenka Shirkadda ayaa sheegay in nidaamkan uu yahay kan ugu horreeya aduunka.
Jidkani, oo ah tii ugu horeysay ee aduunka ee isku-xirka badan ee isku-xirka tareenada, ayaa ah midka ugu sareeya mashruuca 940 million dollar. Tareenada lagu qalabeeyo si buuxda ayaa loo isticmaalaa si ay u soo qaadaan bakhaarada dhexe.
Teknoolajiyada is-gaarsiinta ayaa laga arki doonaa meelo badan oo mustaqbalka ah. Gawaarida isdaba jooga ah ayaa hadda ah mid ka mid ah tiknoolajiyada ugu caansan. Iyada oo horumarinta horumarka tiknoolajiyadaan, baabuurta kala duwan sida kalluumaysiga aan wali lahayn iyo diyaaradaha darawalnimada ah ayaa la arki karaa.
Australia, 40 Granville waxay tababartaa masiibo yıl
29 Qofka Dhaawacmay wuxuu ku dhacay shuftado iyo gawaadhida Australiya
Thales Australiyaanka Sydney Subway Extensive…
Bursa Teleferik Inc., gaadiidka safarka ee aduunka ee ugu wanaagsan
World's Cable-ka ugu dheer
8 dunida ee. waxaan nahay wadan soo saara mashiinka mashiinnada tunnel
China waxay hagaajineysaa 350 Km Speeding Auto Train Per Hour